ချစ်သူများနေ့ ဒိုင်ယာရီ | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
February 17, 2009, 8:32 am Filed under: Lin Let Kyal Sin (Photo : http://sexyinvancity.com/wp-content/uploads/2008/02/ist2_2463420_couple_in_love_mchipster220.jpg )
ချစ်တတ်သူများအားလုံးအတွက် နှစ်စဉ်ရောက်ရှိလာတတ်တဲ့ “ချစ်သူများနေ့” ..။ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၄)ရက် မတိုင်ခင်ကတည်းက လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာ ခြေလိမ်နေကြတဲ့ ကောင်လေး ၊ ကောင်မလေးတွေရဲ့ မျက်နှာပေါ်က ရွေးချယ်မှုအပျော်တွေဟာ ကျွန်မရင်ထဲကို နှစ်စဉ်ချိုမြစွာ ကူးစက်လာလေ့ရှိတယ်။ အမြဲတမ်း ပစ္စည်းလှလှလေးတွေကို သေချာရွေးချယ်ပေးနေတဲ့စိတ်ကူးအချို့က ကျွန်မရင်ထဲမှာ ဒီနှစ် အရောင်တစ်မျိုး ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ တစ်အိမ်ထဲအတူနေရပြီဖြစ်တဲ့ “သူ”မသိအောင် ကိုယ်ပေးချင်တာလေး တိုးတိုးတိတ်တိတ်သွားဝယ်ရတာလည်း နည်းနည်းတော့ရီရပါတယ်။ ကြိုမသိစေချင်တဲ့စိတ်က တော်တော်လေး ဟန်ဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်။ချိုမြလှပတဲ့ “ချစ်သူများနေ့”မှာ နှစ်ယောက်တစ်ဘ၀ တည်ဆောက်ထားပြီဖြစ်တဲ့ ဒီမေတ္တာဘ၀အိမ်ကလေး ပိုမိုအသက်ဝင်သွားအောင် ဒီနှစ်မှာ ဆင်တူပစ္စည်းလေးတွေပဲ ကျွန်မရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ရောင်စုံဘောလုံးတွေ ၊ ပန်းပွင့်လေးတွေ ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေ ကိုင်ဆောင်ရင်း ပျော်ရွှင်စွာ သွားလာနေကြတဲ့ စုံတွဲတွေအားလုံးကိုကြည့်ရင်း ကျွန်မတို့လူတွေအားလုံး “အချစ်”နဲ့ပတ်သတ်ရင် ကျွန်မအပါအ၀င် အားလုံး တော်တော်ရူးသွပ်ကြပါလား စဉ်းစားမိပါတယ်။ အရင်နှစ်တွေ ချစ်သူများနေ့ ကျွန်မ အပြင်မှာ ပျော်ရွှင်စွာ သွားလာနေချိန် အိမ်ပြန်နောက်မကျဖို့ အမြန်သွားလာခဲ့ရတာတွေ ပြန်စဉ်းစားရင်း နှစ်ယောက်သဘောတကျရီခဲ့ရသေးတယ်။ တကယ်တော့ .. ရင်ခုန်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖလှယ်မှုလေးတွေ လိုအပ်သလို ဘ၀မှာ တကယ်ဖြစ်ပျက်လာမယ့် လက်တွေ့အခက်အခဲတွေကို “မေတ္တာ”အပြည့်နဲ့ အဆင်ပြေပြေ ပျော်ရွှင်စွာ ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ရင်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ခိုင်မြဲဖို့ကလည်း သိပ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ချစ်သူစုံတွဲတွေအားလုံး မမေ့ဖို့တော့ အမြဲလိုအပ်လျက်………. ။ Like this:Like Loading...
Comment by MANORHARY
February 18, 2009 @ 2:45 am Reply	ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေကို ဆက်လက်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ….
Comment by မီးငယ်
February 18, 2009 @ 6:23 am Reply	အပြန်အလှန် လက်ဆောင်လေးတွေ ပေးကြတာ ကြည်နူးစရာပါပဲ ။ ကြည်နူးစရာ နေ့ ရက်တွေကို ထာဝရ ပိုင်ဆိုင်ပါစေနော်း-)
Comment by ကောင်းကင်ကို
February 18, 2009 @ 7:05 am Reply	ညီမလေး ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပျော်ရွှင်နေကြတာ ကြည်နူးစရာ။ အားတောင်ကျသွားတယ်။😛 ချစ်သူများနေ့လက်ဆောင်ဆိုတာ တစ်ခါပဲရဖူးတယ်။ တန်ဖိုးမထားခဲ့မိဘူး။ မနှစ်ကချစ်သူများနေ့မှာ အနီးအနားက ကလေးတွေကိုချောကလက်ဝယ်ကျွေးဖြစ်တယ်။ ဒါလောက်ပဲ။ ချစ်သူများနေ့က အစ်မအတွက်တော့ သိပ်မထူးခြားဘူး။ သူများတွေ ပျော်နေကြတာပဲကြည့်ပြီး မုဒိတာပွားရတယ်။
Comment by မေ့သမီး
February 19, 2009 @ 5:59 am Reply	ညီမလေးပျော်နေတာကိုပဲ မုဒိတာပွားသွားပါတယ်။ အစ်မတို့အတွက်ကတော့ ဘာမှမဆိုင်သလိုပါပဲ😛အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပါစေ ညီမလေးရေ
February 21, 2009 @ 3:16 am Reply	ညီမတော်ဆီ အခစားရောက်သွားပါကြောင်း။😀
February 21, 2009 @ 6:01 am Reply	မင်္ဂလာပါ အမရေ ။ အစအစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေ ။
Comment by Aung Phyoe
February 22, 2009 @ 7:06 am Reply	လင်လက် ရေ အမစာဝင်ရေးတိုင်အဆင်မပြေဘူး ခုကော
Comment by မေအိခင် (လယ်ဝေး)
February 25, 2009 @ 7:02 pm Reply	Nyi Ma Lin let,Whatalovely life? I am so glad for both of you.
Comment by Wunna
March 2, 2009 @ 1:11 pm Reply	Nyi Ma Lin let,Whatalovely life? I am so glad for both of you.
March 2, 2009 @ 1:12 pm Reply	အမရေ… အိမ်ထောင်ကျသွားတာနဲ့ ဘလော့ဂ်လေးလည်း အဆုံးသတ် သွားတော့တာပဲနော်…
Comment by Fat Punk
March 17, 2009 @ 1:06 pm Reply	လာလည်သွားတယ် ညီမရေ http://www.nyinyimyanmar.co.cc/
Comment by Nyi Nyi Myanmar
March 22, 2009 @ 3:13 am Reply	ညီမလေး ပျောက်နေတာကြာပြီ။ ပျော်ရွှင်အဆင်ပြေပါစေ…
March 26, 2009 @ 2:09 pm Reply	😀
Comment by Phyo Maw
April 5, 2009 @ 4:27 am Reply	ဘ၀မှာအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ. သို့သော် လောကဓံဆိုတာ ရှိတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။ လောကဓံနဲ့ ကြူံတွေ့တဲ့အခါ အချစ်ဟာ အားဖြစ်ပါစေ။ဘေးမဖြစ်ပါစေနဲ့။ လောကဓံနဲ့ကြုံတဲ့အခါ အချစ်ကို ပျော်စရာ သာဖြစ်ပါစေ။ စိတ်ညစ်စရာမဖြစ်ပါနဲ့။ လူသားအားလုံး လောကဓံနဲ့ ကြုံတွေ့ကြရတာပဲ။ ဒါကြောင့် လောကဓံကို ကြံကြံ့ ခံနိုင်တဲ့ အချစ်မှသာ အချသ်စစ် မည်တာပါ။ချသ်သူတိုင်းပေါင်းကြပါစေ။ အချစ်စစ် တွေခိုင်မြဲပါစေ။
Comment by ၀ိုင်းရတနာ
November 30, 2009 @ 2:17 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI